लोकप्रिय रेडियोकर्मी सुरज श्रेष्ठको ४५ वर्षमै निधन ! – Nepal Trending
लोकप्रिय रेडियोकर्मी सुरज श्रेष्ठको ४५ वर्षमै निधन !
On २८ बैशाख २०७६, शनिबार ०९:४७
काठमाडौं । ईमेज एफएमका पूर्वस्टेसन म्यानेजर सुरज श्रेष्ठको निधन भएको छ ।साढे ४ वर्षदेखि मोटर न्यरोड डिजिट नामक रोगबाट ग्रसित ४५ वर्षीय श्रेष्ठको गएराति २ः१५ बजेतिर उपचारका क्रममा निधन भएको हो । उनलाई पछिल्लो समयमा श्वासप्रस्वास र मुटुसम्बन्धी पनि समस्या देखिएको थियो । उनको स्वास्थ्यमा थप समस्या आएपछि यही बैशाख १६ गते काठमाडौंको ओम अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो ।पहिलो पटक उनी २०७१ मा दिल्लीस्थित मेदान्त अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका थिए ।
उक्त अस्पतालमा निरन्तर उपचार पछि २०७२ साल बैशाखमा नेपाल फर्किएका थिए । विनाशकारी महाभूकम्पपछि उनलाई रोगले थप ग्रस्त बनाएको थियो । सञ्चार क्षेत्रमा निकै ठूलो योगदान पुर्‍याएका श्रेष्ठको निधनप्रति ईमेज च्यानलले दुःख व्यक्त गरेको छ । उन का एक छोरा, एक छोरी र श्रीमती छन् ।
एफएम रेडियोहरुको स्थापनापछि सफल र चर्चित टप फाइफ आरजेहरुमध्ये सुरजको नाम अग्रस्थानमा आउने गर्दथ्यो ।पछिल्लो समय उनी वाइट प्लस अडियो भिडियो कम्पनी संचालन गरी म्यूजिक भिडियोको निर्देशन र सम्पादनमा पनि क्रियाशिल थिए ।वि.स. २०३१ साल फागुन २६ गते जन्मिएका श्रेष्ठका सात जना दिदीहरु छन् । उनी परिवारका कान्छा सदस्य थिए ।